အဆိုပါ undesired - အပိုင်း 21 | Apg29
အဆိုပါ undesired - အပိုင်း 21
အကြှနျုပျ၏မွေးစားအစ်ကို Stig လေးနှစ်အစောပိုင်းက Annerstads အသင်းတော်၌အတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့သညျ။ ငါသည်သူ၏အတည်ပြုချက်ကိုမှတ်မိမည်မဟုတ်ပေမယ့်ငါ့ကိုလည်းအတည်ပြုချင်တယ်။ Stig ငါမသိပေမယ့်ငါကိုအတည်ပြုခံရဖို့လိုအချို့ဖြစ်နိုင်သောလက်ဆောင်တွေရဖို့မဟုတ်ပေမယ့်ရိုးရိုးအကြှနျုပျ၏စိတျအပိုငျးအပေါ်စစ်မှန်သောစိတ်ဝင်စားမှုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်သူ့ဟာသူအတည်ပြုခဲ့သည်ရတဲ့အကြောင်းရင်း။
အတည်ပြုချက်သင်ကြားမှုသင်းအုပ်ဆရာအားဖြင့်ကျင်းပခဲ့သည့် Annerstads ဘုရားကျောင်းအားဖြင့်စီစဉ်ခဲ့သည်။ သွန်သင်ချက်သည်စီရင်စုနယ်အိမ်၏ဒုတိယကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအခန်းတခန်း၌ရှိ၏။ ကျနော်တို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုဖတ်တဲ့သူယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများနှစ်ဦးစလုံးအတွက် 20 လူငယ်များဖြစ်ကြသည်။
သို့သော်လည်းငါသည်အတည်ပြုချက်ကိုသင်ခန်းစာများကိုခက်ခဲများနှင့်ခက်ခဲကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ကျနော်တို့ငါဘာမှနားမလည်ခဲ့ဘူးသောခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းစာအုပ်ကနေကျယ်လောင်စွာဖတ်နေခဲ့သညျ။ အဲဒီနောက်ကျွန်တော်တို့ကို catechist ရန်သွန်သင်ခဲ့ရာယနေ့ဘာမျှသတိရပါ။ ဖြစ်ကောင်းငါကတစ်ခုခုကိုငါ့မွေးနေ့မတိုင်မီနေ့ကိုသောအတည်ပြုချက်ရက်စွဲပေါ်တွင်မှတ်မိကြပါဘူး။
သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အတည်ပြုချက်ကိုအသွင်ပြောင်းသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်ငါ့ကိုထိခိုက်စေပါဘူး။ ငါနေဆဲအတူတူပင်အဟောင်းနဲ့ Chris ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကကျနော်တို့ကဘုရားကျောင်းသို့သွားနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအတည်ပြုကြရုံမရောက်မီဖြစ်ရပ်တစ်ခုအားဖြင့်သက်သေပြခဲ့သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့်တကွလူအပေါင်းတို့ catechist အတည်ပြုချက်ကိုရှေ့တော်၌သေးငယ်တဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာစုဝေးခဲ့ကြသည်။
ငါပြုမိသောရေချိုးခန်း, သှားဖို့လိုအပျတဲ့အခါ။ ငါပြန်ရောက်လာသောအခါ, ငါသည်မိမိလက်ကိုဆေးကြောပြီးမှ, အဖြူရောင် chemise အပေါ် catechist ဘားအားလုံးရေဖြန်းခဲ့သည်။ တစ်စုံတစ်ဦးကဒီအထဲကထောက်ပြ, ဒါပေမယ့်ငါဆီးသောအခါငါကပိတ်ထားခဲ့သည်ထင်, ဒါကြောင့်ငါယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့်တကွလူအပေါင်းတို့ catechist ရှေ့တော်၌ကောင်းသောအသံကျယ် expletive ၌ထား၏။ အဆိုပါဝန်ကြီးငါ၏အနေမကောင်း-ရှေးခယျြသောစကားများထွက်ထောက်ပြ, ငါငါ့မျက်နှာကိုအတွက်pionrödအံ့အားခဲ့သည်။ သို့သော်သကဲ့သို့ငါတို့သည်မဆိုဒုက္ခမရှိဘဲပိတ်ထားလွန်ရှိသောအသင်းတော်နှင့်အတည်ပြုချက်သို့သွားလေ၏။
ကျနော်တို့ကဘုရားကျောင်းသို့သွားသောအခါငါဆန့ ်. နှင့်ဂုဏ်ယူစွာသမ်မာကမျြးနှင့်ဓမ္မသီချင်းစာအုပ်ကျင်းပခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်အတည်ပြုချက်ကာလအတွင်းကဆိုပါတယ်ခဲ့ရာ, ငါသည်အဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိသည်။
ငါအတည်ပြုချက်၌ငါ၏စစ်မှန်သောစိတ်ဝင်စားမှုဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျကိုရှာသောခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါဟာကျွန်မရဲ့ငယ်ရွယ်စဉ်ထဲမှာဘုရားသခင်ကိုရှာသောငါ့ကိုလည်းတစ်ဦးစကားရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းငါသည်ဘုရားသခခဲ့ကြောင်းသိဘူး။
ငါသည်ကိုယ်အသက်ကိုပေါ်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျကိုရှာကြသောအခါငါသည်အခြားဖြစ်ရပ်များကိုကြည့်ပါ။ ဒါဟာငါအချို့ indenna စာအုပ်အကြောင်းသင့်ပြီးသားပြောနှင့်ပြီဖြစ်သောထင်ရသောအသေးဖြစ်ရပ်များ, ဖူးကြပေမည်, သို့သော်ရုတ်တရက်ဘုရားသခင်တည်ရှိကြောင်းနှင့်သူငါ့ကိုမြင်ကြောင်းကို gleamed အချို့ဖြစ်ရပ်များရှိခဲ့ပါပြီ။
နောက်ပိုင်း, ငါသည်ဘုရားသခင်၏ကြောင့်ကြင်နာမပြဘူးသည်ဆိုပါကလက်ဆောင်တွေပေးဖို့မခြိမ်းခြောက်တဲ့သူကို Santa Claus တူသောဘုရား, ဒါပေမယ့်နည်းနည်းယောက်ျားသည်တစ်ဦး ပြော. မကုန်နိုင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိခဲ့သူတစ်ဦးသညျဘုရားသခငျမဟုတျကွောငျးနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်။ ဤသည်မှာမေတ္တာရှင်ဘုရားသခင်အချိန်ဖို့အချိန် ပေး. အနည်းငယ်ငြိမ်သက်မသေချာမရေရာအနိုင်ကျင့်ကောင်လေးခံစားရရန်, ဒါပေမယ့်သူကသူ၏ငယ်ရွယ်နှလုံးရဲ့တံခါးကိုလာခေါက်တယ်ကြောင်းသူမသိခဲ့ပါ
ငါယဇ်ပုရောဟိတ်သည်ယခင်ကတစ်ဦး frikyrkopastor ခဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာမှာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သူကကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်သို့၏ဗဟုသုတနှင့်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးရှိခဲ့သင့်၏, ဒါပေမယ့်သူကကျွန်တော်တို့ကိုဒီမပြောခဲ့ပါဘူး။ သူကပြုမိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်အရာကို။ ထိုအခါငါပြီးသားသိမ်းဆည်းပြီးပြီမယ်အပေါင်းတို့နှင့်ငါ့အသက်ကိုအသွင်ပြောင်းတယ်။ ပူပန်ခြင်းဝေဒနာများနှင့်စိတ်ဆင်းရဲမှုဘဝမှာရှောင်ကြဉ်ခဲ့ကြပေသည်။ ဝနျခံရသူသည်အံ့သြဖွယ်ကျမ်းယော3နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ biblars အဖုံး၏ 16 ကိုးကားခဲ့သည်။ ယင်းကျမ်းပိုဒ်၏စာသားသည်:
"ဘုရားသခသည်ဒါအကြင်သူသည်သူ့ကိုယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရအသက်တာကိုပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရပေမယ့်ရှိသည်မဟုတ်ရကြလိမ့်မည်အကြောင်း, သူတပါးတည်းသောသားတော်ကိုပေးသောကမ္ဘာကြီးကိုချစ်တော်မူ၏။ "
သူကကျမ်းစာထဲမှာကြောင်းကျမ်းပိုဒ်ကိုးကားခဲ့သောဒါပေမယ့်ကျွန်မနှစ်ပေါင်းများစွာအကြာမှာသည်အထိသတိထားမိလျှင်, သူကပြောကြားခဲ့သည်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုများအတွက်ကျမ်းပိုဒ်ကရှင်းပြသည်ဘူး။ အတည်ပြုချက်ငါ့ကိုဤသို့မကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။
ငါ၏အကလေးဘဝစဉ်အတွင်းကတစ်ခါတစ်ရံတွင်မှောင်မိုက်သောအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏သတိပေးရှိတယျဆိုတာနိုင်ဘူး။ အဲဒီနောက်သူကနားမလည်ခဲ့ဘူး, ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာမှာပြန်ပြောင်းကြည့်ရမည်ဆိုလျှင်၌ရှိ၏နှင့်ငါ့ဘဝအပေါ်ပြန်ကြည့်နိုင်သည့်အခါ, ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရနိုင်ပါတယ်။
ဒဏ်ငွေ nsturmotiv နှင့်အတူပိုစတာခဲ့ကြသည်ထိုသို့သောအမှုကိုအဖြောင့်ငါ့ကို၏စိတ်နှလုံးသို့သွားနိုင်ဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်, သစ်ပင်များကိုနောက်ကွယ်မှနေတဲ့နေရောင်။ ထိုအဖို့အညီကျမ်းစာလာသည်။ ငါတစ်ခါတစ်ရံစီရင်စုနယ်ခန်းမထဲမှာဥပမာ, ထိုကဲ့သို့သောပိုစတာကိုဖြတ်ပြီးလာနိုင်ဘူး။ ငါသူတို့အပေါ်မှာကျမ်းကိုဖတ်ရတဲ့အခါကျွန်မသူတို့ဆံ့နိုင်သောအရာကိုအာဏာမှာအံ့သြခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကဒါအသက်ရှင်နှင့်ညာဘက်ငါ့နှလုံးသို့မပြောတတ်နိုင်ဘူး။ ငါကောင်းကောင်းပိုစတာမှာရှာနေပုံကိုအံ့ဩမိန်းမောခြင်းနှင့်အံ့သြတဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောအခါသမယသတိရပါ။ ဒါဟာအကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပျက်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအခါသမယအပေါ်ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျကိုအားမိန့်တော်မူခြင်းနှင့်ကိုယ်နှိုက်ကဤကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာလူသိများစေ။ ဒါပေမယ့်ငါကနှစ်ပေါင်းများစွာအကြာမှာသည်အထိသူဖွစျသညျကိုသိ၏ဘယ်တော့မှမ။
Ingrid Ljunggren အလွန်ကောင်းသောပညာပေး list သင်ခန်းစာများရှိခဲ့သည်။ မကြာခဏဆိုသလိုသူမ Self-ရိပ်မိသောအရာတို့ကိုအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။ ဒါဟာသူမစကားကိုနားထောင်နှင့်သူမကပြောသည်ဆုံးမဩဝါဒပေးယျယူရန်လွယ်ကူခဲ့ပါတယ်။
ဘာသာတရားအပေါ်တဦးတည်းမှာငါဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မယ်။ သူမကခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်လျှင်ငါမသိပေမယ့်သူမသူမနှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းမွေးကင်းစကလေးငယ်နေမကောင်းပြိုလဲခဲ့ကြောင်းနှင့်ဆေးရုံတင်ခဲ့ပြောတယ်။ ထိုအခါသူတို့ကအတော်လေးကောင်းသူကို၎င်းတို့၏သားသမီးတို့အဘို့ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်း။ သူတို့ကဆုတောင်းခြင်းအဖြေကိုရတယ်။ ဒါဟာသူမတစ်တန်းလုံးကိုပြောသည်။ ငါတိတ်တဆိတ်ထိုင်လျက်နှင့်ငါ့စားပွဲခုံမှာတအံ့တသြနားထောင်ခဲ့တယ်။
အဆိုပါကျောင်းသည်ကျွန်တော်အလုပ်၏ကမ္ဘာ၏တစေ့တစောင်းရဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျနော်တို့ငါသိသာသိရန်အလွန်ခက်ခဲခဲ့သောနဝမတန်းများအတွက်ရှေးခယျြမညျ့အရာကိုတစ်ဦး hum ရဖို့ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီစာသင်အတွက်တစ်ချိန်ချိန်မှာ prya မယ်လို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ငါအလှဆင်အဖြစ် Ljungby တှငျငါတစ်ချိန်က prya ဌာနစတိုးဆိုင် Tempo အနုပညာကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ကတည်းက။ သူတို့ကနိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုပြုလေ၏ခဲ့သူသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Decorators န်ထမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲကျွန်မဒါအကောင်းမကြိုက်တယ်ကြောင့်ပဏာမယူရန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်ငါ၏အငြိမ်သက်နှင့်မသေချာမရေရာလမ်းကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
သောကြောင့်အနုပညာ၌ငါ့စာရင်းပေးသွင်းမှုနှင့်အကျိုးစီးပွားငါ Helsingborg အတွက်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးကောလိပ်ကျောင်းမှာစမ်းသပ်မှုအညီတစ်ပါတ် prya ရလိမ့်မယ်လို့အခြားစာသင်၏ဆွေးနွေးချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Psyokonsulenten တစ်ပါတ်အဲဒီမှာ၌ငါ့ကိုရဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ ငါငါ့အခရီးရှည်စိတ်ပူခဲ့ပေမယ့်, ချ Helsingborg ဖို့ဘတ်စ်ကားစီးခဲ့ပေမယ့်ကောင်းကောင်းသို့ သွား. , ပြီးတော့ကျောင်းထဲကနေဆရာသညျ လာ. အကြှနျုပျကိုခြီကောက်ယူသတိရပါ။ ငါသည်သူ၏မိသားစုနှင့်အတူအိမ်တွင်နေထိုင်နေခဲ့ပါသည်။
ကောလိပ်မှာညနေငါကျောင်းသားအုပ်စုတစုနှင့်အတူရပ်နေနှင့်အချို့သောဘောလုံးကစားသမားကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ မရကဒီကြောငျးအတှကျခရစ်ယာန်ခဲ့လျှင်ငါသည်ထိုသူတို့ကိုတဦးကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာ။ ထိုအခါငါသူခရစ်ယာန်များကိုပယ်ရှားကရှင်းပြသည်ရသောအထံတော်၌ရှည်လျားသော Exposition ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မခရစ်ယာန်တစ်ဦးပတ်ဝန်းကျင်တွင်ခဲ့ပေမယ်ယေရှုအကြောင်းဘာမှမကြားခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်းဝေးဒီတော့နီးစပ်သေး ...
ကြှနျတေျာ့မွေးအိမ်မှာအိမ်မှာငါနန်းတော်ထဲမှာစာအုပ်တင်စင်အတွက်တွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်ခဲ့သေးငယ်တဲ့အဖြူဂိဒေါင်ကမျြးစာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါကလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့မသိရပါဘူး။ ဒီတစ်ခါလည်းငါ့မွေးစားအစ်ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကသတ္တုတွင်းခဲ့ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့လို့မရပါဘူး။ godeonierna ကျောင်းစာသင်ခန်းထဲမှာကမျြးစာကိုဓမ္မသစ်ကျမ်းဖြန့်ဖြူးသည့်အခါဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ငါ့အစ်ကိုကသူအတွက်ထွက်သွားကြောင်းကိုတယ်။ Gidroniter ကျောင်းများနှင့်ဟိုတယ်ခန်းများနှင့်အကျဉ်းထောင်များအတွင်းရှိ snmst အကြားမှာရှိတဲ့ကျမ်းစာထွက်လိုက်တာနဲ့အဘို့ဟုခေါ်ကြသည်။ သူတို့ကဓမ်မဟောငျးကမျြးထဲမှာဂိဒေါင်ပြီးနောက်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ယူခဲ့သည်။
ငါမဿဲ၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဖတ်ရှုစတင်ဖွင့်ငါကိုဖတ်ရှုဘယ်သို့သောအားဖြင့်လွင့်ခဲ့သည်။ ဒါဟာဘာစိတ်လှုပ်ရှားပဲ! ငါရပ်တန့်နိုင်ဘူး။
ငါကိုဖတ်ပြီးအဖြစ်စကားလုံးများကိုနထေိုငျခဲ့သညျ။ သူတို့သည်ငါ၏နှလုံး၌တရားတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဒါဟာသာမန်ဇာတ်လမ်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။
မလိုလားအပ်သော MY Serial ကျသကေို
အပိုင်း 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ဤသည်အမှတ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေနောက်ပိုင်းတွင်ငါ့အသက်ကိုဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဝတ်အချည်းစည်းများနှင့်လင်းလင်းပြောပြပါ။ တစ်ဦးကအများကြီးငါအစောပိုင်းကအကြောင်းကိုပြောဖူးဘူး။ ဇာတ်လမ်းနာမည်တချို့ကိုအယောင်ဆောင်ပြီးဖြစ်ကြသည်။
Vecka 17, onsdag 24 april 2019 kl. 08:33